जीवनशैली GNN Nepal जीवनशैली
दिमाग स्वस्थ भएका मानिसहरू परिवर्तनसँग डराउँदैनन्
दिमागी रुपमा स्वस्थ व्यक्ति एक ठाउँमा बसेर परिस्थितिले आफूलाई यस्तै पार्‍यो भन्दै दुखी भएर बस्दैनन्। उनीहरुलाई अरुले आफूलाई कस्तो व्यवहार गर्‍यो भन्ने बास्ता लाग्दैन। त्यसको सट्टा जीवनमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन
वैशाख २५ गते, २०७८ १३:५६ मा प्रकाशित
लक्षण आधा टाउको अथवा टाउकाको कुनै सानो भागमात्रै या पुरै भाग पनि दुख्ने नाडी चले जस्तो ढुकढुक या बलकबलक दुरी दुख्ने कसैकसैलाई वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने रोगी बढी रिसाउने, झर्किने,
वैशाख २२ गते, २०७८ १४:३१ मा प्रकाशित
यी हुन् घरमा सूक्ष्मजीव फैलन नदिन र स्वस्थ रहन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
बिबिसी। ब्रिटिश रोयल सोसाइटी फर पब्लिक हेल्थ(आरएसपीएच)ले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार मानिसहरूले आफ्ना घरका फोहोर देखिएका ठाउँहरू सफा गर्नमा भन्दा पनि आफ्ना घरमा सूक्ष्मजीवहरू नफैलिउन् भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड
चैत २१ गते, २०७७ ११:३४ मा प्रकाशित
गर्मीमा यस्ता खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक
जाडो अथवा गर्मी जुनुसकै मौसम होस्, खाना हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हो। प्रकृतिले नै हाम्रा लागि कुन मौसममा कस्ता खानेकुरा खानु उपयुक्त हुन्छ भनेर विभिन्न मौसममा विभिन्न खाद्यवस्तुको उत्पादन वरदानस्वरुप दिएको
चैत १८ गते, २०७७ १३:४२ मा प्रकाशित
पानी पिउने काँचको गिलास कति सुरक्षित ?
काठमाडौँ। हामीले पानी पिउने काँचको गिलासमा अनेक रंगमा बुट्टाले सजाइएको देख्दा गिलास नै सुन्दर देखिन्छन्। तर एउटा बेलायती अध्ययनले यस्ता काँचका गिलासमा हुने लिड र क्याडमियमको स्तर हाम्रो स्वास्थ्यका लागि
चैत ८ गते, २०७७ १२:५१ मा प्रकाशित
ग्यास्ट्रिक छ ? यी कुरामा पुर्‍याउनु होस् ध्यान
ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ । यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन
चैत ५ गते, २०७७ १२:२३ मा प्रकाशित
यी हुन् माइग्रेनका लक्षण र ध्यान दिनुपर्ने कुरा
विश्वको तेश्रो ठूलो समस्याको रुपमा रहेको माइग्रेको समस्या नेपालीहरु माझ आम समस्या हो । नेपालमा १८ प्रतिशत महिला तथा १४ प्रतिशत पुरुषमा यो समस्या देखिएको छ । टाउको दुखाईको विभिन्न
चैत २ गते, २०७७ १३:३२ मा प्रकाशित
आज पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना हुने
काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभावले शनिबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार उक्त प्रणालीको प्रभावले
फागुन २९ गते, २०७७ ११:२२ मा प्रकाशित
अनुहार राम्रो कसरी बनाउने ?
अनुहार मानिसको सबैभन्दा पहिले देखीने भाग हो, मानिसको सुन्दरताको एउटा प्रमुख कडीको रुपमा पनि अनुहारलाई लिन सकिन्छ । तर अनुहार राम्रो पार्न व्युटी पार्लर नै धाउन पर्ने वा कुनै कस्मेटिक
फागुन २४ गते, २०७७ १४:३३ मा प्रकाशित
मिर्गौला रोग के हो ? कसरि जोगाउने ?
मिर्गौला हाम्रो शरीरको निष्कासन प्रणालीसँग सम्बन्धित अंग हो। यसले २४ घण्टामा करिब २ सय लिटर रगत छान्ने काम गर्दछ। यस प्रक्रियाबाट रगतमा भएका विकार वस्तु हटाउनुका साथै अत्यधिक पानीलाई पिसाबको
फागुन १३ गते, २०७७ १२:१५ मा प्रकाशित
देशभर अधिकांश भागमा वर्षा र हिमपात, भोली मौसम सुध्रिएला ?
काठमाडौं । राजधानीका केही स्थानमा बिहानदेखी धुम्म भई पानी परीरहेको छ भने देशका केहि भागमा हिमपात पनि भएको छ । पश्चिमी वायुको प्रभावले मौसममा बदली भएको मौसम विभागले जनाएको छ
माघ २४ गते, २०७७ १६:०३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । राम्रो र गोरो बन्न सबैलाई इच्छा हुन्छ । विशेषगरी युवाहरूमा राम्रो भएपछि सबैले माया गर्छन् र आत्मविश्वासी हुन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । जुन निकै हदसम्म सत्य पनि
माघ २० गते, २०७७ १३:४५ मा प्रकाशित
थाहा पाउनुस्, यी जनावर पाल्दा घरमा सदैव शुभ हुन्छ
काठमाडौँ । मानिसहरू आफ्नो शोक र इच्छा पूरा गर्नका लागी विभिन्न प्रकारका घरपालुवा या वनपालुवा जनावरहरू पाल्ने गर्दछन् । तर घरमा पछुपन्छिहरु पाल्नु अगाडि यो पनि जान्न जरुरी पनि छ
माघ १७ गते, २०७७ १६:५१ मा प्रकाशित
बारम्बार तिर्खा लाग्छ ? गम्भीर बिरामी हुन सक्छ, नगर्नुहोस् बेवास्ता
काठमाडौँ। हाम्रो जीवनलाई पानीले सन्तुलित बनाउँछ। पानीको परिमाण शरीरमा असंतुलित भयो भने यसले शरीरमा धेरै समस्याहरु निम्त्याउन सक्छ। शरीरको भित्री प्रणालीले तिर्खा अनुसार पानीको आवश्यक्ता पुर्‍याउँछ। यद्यपि धेरै चोटि कोही
माघ १६ गते, २०७७ १२:०९ मा प्रकाशित
मुटु स्वस्थ राख्न बिदाकाे दिन धेरै नसुत्नुस् : अध्ययन
काठमाडौँ। चीनको म्याकमास्टर एन्ड पिकिङ युनियन मेडिकल कलेजमा भएको एक रिसर्चले आवश्यकताभन्दा धेरै निदाउँदा मुटुमा समस्या बढ्न सक्ने धेदेखाएको छ । अनुसन्धानमा २१ देशका ११,७०० मानिसहरु सहभागी थिए । जसको
माघ ११ गते, २०७७ ११:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौं। मौसमको परिवर्तनसँगै शरीरमा पनि विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरु हुन्छन् । अझ उमेर बढेसंगै छालामा पनि बिभिन्न किसिमका परिवर्तनहरु देखापर्न थाल्छ । अनुहारको छालामा आउने मुख्य परिवर्तन भनेको चाउरीपन पनि एक
माघ १० गते, २०७७ १४:११ मा प्रकाशित
ब्रेकअपको पिडाबाट मुक्त हुन दैनिक गर्नुहोस् यी पाँच व्यायाम
काठमाडौं । भनिन्छ सम्बन्धहरू घाटा र नोक्सान हुन्। यस्तो अवस्थामा, जो घाटा वा नोक्सान सहन सक्छ, ऊ सम्बन्ध निभाउन सक्षम हुन्छ। तर आजको समयमा मानिसहरूलाई सम्बन्ध तोड्न वा कसैलाई छोड्न
माघ ७ गते, २०७७ १३:४३ मा प्रकाशित
के तपाईंलाई थाहा छ? तातो पानी पिउँदा धेरै बेफाइदाहरू पनि हुन्छन्
काठमाडौँ । जस्तो कि तपाईंलाई थाहा छ पिउने पानीका धेरै स्वास्थ्य लाभहरू छन्। पानी पिउनु शरीरको लागि धेरै लाभदायक हुन्छ। पानीमा धेरै खनिज र अन्य तत्वहरू हुन्छन्। यस्तै तातो पानी
माघ ३ गते, २०७७ १५:०४ मा प्रकाशित
तनावले कोरोना खोपको असरलाई कम गर्ने, जान्नुहोस् यसबाट बच्ने सहज तरिका
एजेन्सी । दशकौंको अनुसन्धानले तनाव, एक्लोपन र नराम्रो स्वास्थ्यले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मात्रै नभई खोपको प्रभावलाई पनि कमजोर पार्छ भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ। त्यस्तै केही कोभिड भ्याक्सिनलाई लिएर पनि अनुमान
माघ ३ गते, २०७७ १४:०० मा प्रकाशित
महोत्तरी। विगत तीन दिनदेखि बाक्लो हुस्सु र अत्याधिक चिसोका कारण महोत्तरीलगायत तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ । दिनभरी नै लाग्ने हुस्सु र कुहिराका कारण घाम लाग्न नसकेपछि बढेको चिसोले तराईको